काठमाण्डौ । एनएमबि बैंकको २६ औँ वार्षिक साधारणसभाले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रस्तावित कुल १५.८ प्रतिशत लाभांश अनुमोदन गरेको छ। काठमाण्डौको त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लबमा आज बिहीबार सम्पन्न वार्षिक साधारणसभाले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट हाल कायम चुक्तपुँजीको १२.५० प्रतिशत बोनस सेयर र ३.३ प्रतिशत नगद लाभांश (बोनस र नगद लाभांशको कर...
एनएमबि बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारीलाई हिमालय दृश्य होटेलमा विशेष छुट
काठमाण्डौ । एनएमबि बैंक र धुलिखेलस्थित हिमालय दृश्य होटेलबीच छुट सम्झौता भएको छ। सम्झौतापत्रमा एनएमबि बैंकका एरिया म्यानेजर निरन श्रेष्ठ र हिमालय दृश्यका एसोसिएट डाइरेक्टर सेल्स एन्ड मार्केटिङ बबिता पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौताअनुसार बैंकका ग्राहक र कर्मचारीलाई हिमालय दृश्य होटेलले खानामा १० प्रतिशत तथा आवास...
काठमाण्डौ । एनएमबि बैंक लिमिटेडले स्विस इन्भेस्टमेन्ट फन्ड इममर्जिङ मार्केट्स (सिफेम) सँग १ करोड २० लाख अमेरिकी डलर ऋण प्राप्त गर्ने गरी सम्झौता सम्पन्न गरेको छ। सिफेमबाट पहिलोपटक नेपालमा लगानी भित्र्याउने गरी भएको यो सम्झौतामा सिफेम र स्विस सरकार विकास सहयोग एसडीसीबीचको सहकार्यको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। नेपाल स्वि�...
आक्रामक रुपमा जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानी बढाउँदै एनएमबि बैंक
काठमाण्डौ । एनएमबि बैंकले १३.५ मेगावाट तथा १२ मेगावाटका क्रमश सुपर काबेली खोला–ए जलविद्युत आयोजना तथा सुपर काबेली खोला क्यासकेड जलविद्युत आयोजनाहरुको मुख्य लगानीकर्ता भई वित्तीय व्यवस्थापन गरेको छ। प्रदेश १ अन्तर्गत ताप्लेजुङ जिल्लामा रहेको सिरिजंघा गाउँपालिकामा निर्माण भइरहेको सुपर काबेली खोला–ए जलविद्युत आयोजना तथा सुपर...
एनएमबिको भिडियो केवाईसीमार्फत खाता खोलेर पहिलो कारोबार गर्दा रु. २५०० सम्मको फाइदा
काठमाण्डौ। ग्राहकले एनएमबिमा भिडियो कलमार्फत अनलाइन नयाँ खाता खोल्न यस डिजिटल सेवा प्रयोग गरेर आफ्नो केवाईसी विवरणहरू पूरा÷अपडेट गर्न सकिने योजना ल्याएको छ। उक्त योजनाअन्तर्गत ओम्नी च्यानल (मोबाइल, इन्टरनेट बैंकिङ) मार्फत गरिने पहिलो कारोबार जस्तै– दैनिक उपभोग्य बस्तु खरिद, विद्यायलको शुल्क, टपअपलगायतमा रु. २ हजार ५०० वा १०...
काठमाण्डौ। एनएमबि बैंकको ब्रान्ड एम्बेसेडर रहेका लोकप्रिय युवा अभिनेता तथा समाजसेवी पल शाहको विषेश उपस्थितिमा विराटनगरमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। बैंकले शनिबार मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकास्थित टंकी सिनवारी शाखा र विराटनगरको महेन्द्र चौकस्थित प्रदेश कार्यालयको प्राङ्गणमा बैंकको वित्तीय योजनाका बारेमा...
काठमाण्डौ । नेपालकै उत्कृष्ट बैंक एनएमबि बैंकले आफ्नो सम्मानको सूचीमा अर्को एउटा विश्व प्रतिष्ठित पुरस्कार थपेको छ। नेपाली बैंकिङ इतिहासमै पहिलोपटक एनएमबि बैंकले ‘बैंक अफ दि इयर एसिया २०२१’ अवार्ड हात पार्न सफल भएको हो। बेलायतको लन्डनबाट प्रकाशित हुने प्रसिद्ध म्यागजिन दि बैंकरको निर्णायक मण्डलले ‘दि बैंक अफ दि इयर एसिया...
एनएमबी बैंकले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, यस्ता छन् मुख्य अजेन्डा
काठमाण्डौ । एनएमबी बैंक लिमिटेडले आफ्नो २६ औँ वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ। बैंक सञ्चालक समितिको सोमबार दिउँसो बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभाको मिति तय गरेको हो। बैठकले बैंकको वार्षिक साधारणसभा आगामी पुस २२ गते आयोजना गर्ने र सभामा लैजाने अजेन्डाहरु तय गरेको छ। सभाले विशेष प्रस्तावका रुपमा पेस गरिने गत आर्थिक वर्षका लागि...
एनएमबी बैंकले पायो रु. ३.५ अर्बको ऋणपत्र निष्कासन गर्ने अनुमति, ब्याज कति ?
काठमाण्डौ । एनएमबी बैंक लिमिटेडले ३.५ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्र निष्कासन गर्ने अनुमति पाएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले आज एनएमबी बैंकलाई ‘एनएमबी इनर्जी बन्ड’ निष्कासन गर्ने अनुमति दिएको हो। धितोपत्र बोर्डको अनुमतिसँगै अब बैंकले १ हजार अंकित दरका कुल ३५ लाख इकाइ ऋणपत्र निष्कासन गर्नेछ। बैंकले कुल इकाइमध्ये २१ लाख इकाइ...
एनएमबी बैङ्कद्वारा नेपालमा नै पहिलो पटक एआईमा आधारित भिकेवाईसी सञ्चालन
काठमाण्डौ । बैङ्कको खाता खोल्न सहजीकरण गर्दै एनएमबी बैङ्कले नेपाली बैङ्किङ क्षेत्रमा नै पहिलो पटक भिडियो केवाईसी (भिकेवाईसी) सञ्चालनमा ल्याएको छ। भिकेवाईसीमार्फत स्वदेश साथै विदेशमा रहेका ग्राहकहरूले सजिलै भिडियो कलमार्फत ५ मिनेटमा नै खाता खोल्न सक्छन्। बानेश्वरस्थित द एभरेस्ट होटेलमा भिकेवाईसीको घोषणा गर्दै बैङ्कले एनएमबी...
एनएमबि बैंकद्वारा लाभांश प्रस्ताव, बोनस र नगद कति ?
काठमाण्डौ । एनएमबि बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। बैंक सञ्चालक समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्षको वितरणयोग्य मुनाफाबाट हाल कायम चुक्तापुँजी १६ अर्ब ३२ करोड ५९ लाख ६० हजार ८५२.६६ रुपैयाँ कुल १५.८ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो। प्रस्तावित लाभांशमा १२.५ प्रतिशतले हुन आउने २ करोड ४...
एनएमबिका ग्राहकले अब इभो स्टोर र ओलिजमा फ्ल्याट रु. १५०० क्यासब्याक पाउने
काठमाण्डौ । यसपालिको बडादसैँ, तिहार र छठ पर्वका अवसरमा एनएमबि बैंकले महाछुट अफर प्रस्तुत गरेको छ। यस घटस्थापना देखी इभो स्टोर र ओलिजबाट एप्पल तथा अन्य सामानको कम्तीमा रु. ३० हजारसम्मको खरिदमा फ्ल्याट रु. १ हजार ५०० क्यासब्याक सुविधा पाउन सक्नेछन्। यो सुविधा सीमित अवधिका लागिमात्र उपलब्ध रहनेछ। यसैगरी यस घटस्थापनादेखि एनएमबिका...
काठमाण्डौ । यसपालिकाको बडादसैँ, तिहार र छठ पर्वका अवसरमा एनएमबि बैंकले महाछुट अफर प्रस्तुत गरेको छ। यस घटस्थापनादेखि बिगमार्टबाट विभिन्न सामानको पोसमार्फतको हरेक खरिदमा १०% देखि रु. ३०० सम्मको क्यासब्याक सुविधा पाउन सक्नेछन। यो सुविधा सीमित अवधिका लागिमात्र उपलब्ध रहनेछ। बैंकले आफ्नो सेवा अभिवृद्धि गर्ने क्रममा यस्ता...
एनएमबिका ग्राहकले अब सीजी इलेक्ट्रोनिक्सका सामानमा ४०% सम्म छुट पाउने
काठमाण्डौ। आउँदो बडा दसैँ, तिहार र छठ पर्वको अवसरमा एनएमबि बैंकले महा छुट अफर प्रस्तुत गरेको छ। यस घटस्थापनादेखि सीजी डिजिटल तथा एलजी शपी शोरुमहरुबाट LG, CG, Godrej TCL, Sensei, Kent, Elica & Black+Decor को समानको खरिदमा एनएमबिका तर्फबाट २०% देखि रु. १ हजार ५०० सम्मको क्यासब्याक सुविधा र तत्काल छुटका रुपमा २०% सम्मको छुट पाउन सक्नेछन्। यसका साथै आफ्ना ग्राहक...